DEG-DEG: DAAWO: Puntland oo saacadaha soo socda qaadaysa duulaankii lagu xorayn lahaa Laascaano iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal oo biyo qabow ku shubay hadalkii Faroole. – Puntland News.net
Home 2018 January 13 Somali News DEG-DEG: DAAWO: Puntland oo saacadaha soo socda qaadaysa duulaankii lagu xorayn lahaa Laascaano iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal oo biyo qabow ku shubay hadalkii Faroole.
DEG-DEG: DAAWO: Puntland oo saacadaha soo socda qaadaysa duulaankii lagu xorayn lahaa Laascaano iyo guddoomiyaha gobolka Nugaal oo biyo qabow ku shubay hadalkii Faroole.
Gudoomiyaha Gobolka Nugaal ayaa sheegay inuu socdo diyaar garow maamulkiisu ugu jiro ka jawaabida duulaan uu sheegay in Ciidamo ka amar qaadanaya Somaliland ay maalmo ka hor ku qabsadeen magaalada Tuko raq oo ka tirsan Gobolka Sool.
Cumar Faraweyne oo ka warbixiyay kaalinta dadka Gobolka Nugaal ku leeyihiin difaaca Puntland ayaa u direy maamulka Somaliland hanjabaad kulul,wuxuuna sheegay Puntland inuu kasoo dhamaanayo dulqaadkii 10 sano ka hor ay Somaliland ku qabsatey magaalada Laascaano ee xarunta Gobolka Sool.
Gudoomiye Cumar ayaa sheegay in lagu guuldareystay dadaaladii beesha caalamka, Iyadoona uu ku eedeeyay Madaxda Somaliland inay jabiyeen talaabooyin xal u ahaa baajinta colaada labada dhinac.
Hadalka Gudoomiyaha Gobolka Nugaal ayaa kusoo beegmaya xilli laga dareemayo saansan dagaal iyo dhaq dhaqaaq ciidan oo xoog leh goobo ka tirsan Gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan Puntland iyo Somaliland.